Wadada xiriirisa Baladweyne iyo Buulo Burde Ayey Ciidanka Itoobiya Galabta Odayaal badan ku dilany – STAR FM SOMALIA
Wararka laga helaayo Gobolka Hiiraan, ayaa waxay sheegayan in galabta Odayaal Dhaqameedyo ka amba baxay Magaalada Baladweyne, kuna wajahnaa Deegaanka Halgan lagu rasaaseeyay Deegaankaasi, oo ku yaala inta u dhaxeyso Baladweyne iyo Buulo Burde.
Odayaasha Dhaqanka oo la socday gaari hoomey/caasi ahaa, ayaa waxaa lagu rasaaseeyay Deegaanka Halgan, oo maalintii Khamiista dagaal qaraar loogala wareegay Xoogaga Ururka Al Shabaab.
Odayaashan, ayaa la soo sheegayaa in tacsi kaga qaybgalayeen Deegaanka Halgan, waxaanse la aqoon waxa keenay in Ciidanka Itoobiya ay rasaas xoogani oodda kaga qaadaan.
Waxaa la xaqiijiyay dhimashada lix ka mid ah Odayaashii Dhaqanka iyo dhaawaca sideed kale. Gaarigaasi oo ay la socdeen illaa 14 ruux, ayaa noqday wax dhinta iyo wax kaloo ku dhaawacma rasaastaasi.
Odayaasha Dhaqanka ee dhacdadaasi ku geeriyooday, ayaa waxaa laga xusi karaa Nabadoon Cilmi Shabeel, oo ka mid ah Odayaasha Dhaqanka ee sida weyn looga garanaayo Xarunta Gobolka Hiiraan.
Maamulka Gobolka Hiiraan, Saraakiisha Dowladda iyo Amisom, ayaan wax war ah weli ka soo saarin dhacdadaasi, oo galabta si weyn looga hadalhaayo Magaalada Baladweyne iyo Deegaanka Halgan.